Sarkaal ka tirsan CIA-da Mareykanka ayaa todobaadkii hore waxaa lagu dilay Soomaaliya, sidda ay ku warantay warbaahinta Mareykanka. Sarkaalka waxaa la sheegay u geeriyooday dhaawac kasoo gaarey howlgal ka dhacay Soomaaliya.
Sidda ay ku warantay CNN, sarkaalkan aan magaciisa lasoo bandhigin wuxuu sidoo kale kasoo mid ahaa Ciidamadda Badda Mareykanka [Navy SEAL], Lama ogga magaaladda uu ka dhacay weerarka lagu dilay sarkaalka iyo qaabka uu u dhacay. Laamaha ammaanka Soomaaliya wali kama warbixin dhacdadaas.
Dhimashaddan ayaa imaaneysa xilli maamulka Donald Trump uu ku fekerayo in uu Soomaaliya ka saarayo 600 askari ee Mareykanka ka joogta waddanka.
Ciidamadda Sidda Gaarka ah u tababaran ee Mareykanka ayaa dhigooda Soomaaliya waxay ka caawiyaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo tababarada.
Hay’adda Sirdoonka Dibada Mareykanka ee magaceeda loo yaqaano CIA ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho dhacdadan. Balse wargeyska New York Times wuxuuu noqdey isha koowaad ee laga soo wada xigto geerida sarkaalka.
Iyaddoo lataliyeyaasha milatariga Mareykanka ee jooga Soomaaliya ay doonayaa in ciidamada Soomaaliya ay hogaamiyaan howlgaladda, haddana askarta Ameerikaanka dhankooda waxa ay qeyb ka yihiin dagaaladda.
Bishii September, askari Ameerikaan ah ayaa ku dhaawacmay markii Al-Shabaab ay weerar ku ekeysay ciidamada Mareykanka iyo Soomaaliya.
Mareykanka ayaa tan iyo sanadka 2013-kii wuxuu xoojiyey dedaaladiisa dhanka milatariga ee Soomaaliya uu ka fuliyo waxaana maamulka Trump uu wixii ka dambeeyay 2017-kii amray duqeymo lagu kaabayo kumaandooska Danab.
axadle 6044 posts
the case that highlights the situation for the entire Nionos circle